Ny hatsaran-tarehin’ny salohim-bary avy amin’ny talenta ara-javakanto any India sy Nepal tsy dia misy mpahalala loatra · Global Voices teny Malagasy
Namorona zavakanto amin'ny salohim-bary ny vondrom-piarahamonina any Azia Atsimo
Voadika ny 04 Oktobra 2019 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Ελληνικά, Español, Italiano, Esperanto , ਪੰਜਾਬੀ, नेपाली, 日本語, English
Ny ‘jhutti’ vita amin'ny salohim-bary. Saripikan'i CK Kalyan Tharu. Nahazoana alàlana.
Ny vary no foto-tsakafo any amin'ny vondrom-piarahamonina Aziatika nandritra ny taonjato maro, ka tsy mahagaga raha lasa asakanto any amin'ny faritra ity loharanon-tsakafo lehibe ity. Raha nanao sary sy nandoko an'io vary io ny mpanakanto sasany, ny vondrom-piarahamonina hafa kosa nanohy ilay fomba fanao fanenomana izay tsy misy mahalala loatra sy tranainy ny salohim-bary ho lasa endrika tsara tarehy handravahana ny tranon'izy ireo.
Any amin'ny fanjakana Indiana atsimo ao Kerala, ahantona amin'ny trano sy ny tempoly ny kathirkula, salohim-bary norandranina nofehezina miaraka. Mitondra fahasalamana, harena ary fanambinana tsara ao an-trano izany raha araka ny finoana.
Ny Kathirkula (fehezam-bary natambatra), sary ara-poko nampiasaina hahazoana fanambinana ao an-trano. Salohim-bary narandrana mitambatra ny Kathirkula ary nofatorana eo amin'ny lohany, miendrika fehezam-boninkazo ary matetika ahantona ao an-trano any Kerala
Nanoratra momba ilay fanantonana salohim-bary any Kerala, India ihany koa ny pejy Facebook, R-Aadya :
Fehezana akotry narandrana miendrika asakanto, mazàna ahantona eo anoloan'ny varavarana fidirana amin'ireo tranon-drazana fahiny (Tharavadu) any Kerala ny “Nelkathir” .
Manambara ny fanambinana ao an-trano izany. Mifamatotra amin'ny fomban-drazana antsoina hoe “Illam Nira” – (Trano feno vary akotry) izany . Manambara ny fambolena sy ny fijinjana any Kerala io fombafomba io. […] I Hita eny anoloan'ireo tempoly rehetra any Kerala ihany koa izany ho mariky ny fahasoavana.
Marika fahatsiarovana ny vanim-potoana fahiny.
Any amin'ny fanjakana Indiana Atsinanana any Odisha, hanaovana sary eny amin'ny rindrina sy ny gorodona mandritra ny fotoan'ny fety ny jhoti na chita – zavakanto Odia nentim-paharazana namboarina avy amin'ny kobam-bary. Atao sary ny fehezana vary akotry na ny salohim-bary mandritra ny Deepawali, ilay fetiben'ny hazavana. Nilaza ny Sampan-draharahan'ny Fiteny sy ny Kolontsaina Odia hoe:
During this auspicious occasion, the mud walls and floors are decorated with murals in white rice paste or pithau. They are called jhoti or chita and are drawn not merely with the intention of decorating the house, but to establish a relationship between the mystical and the material, thus being highly symbolical and meaningful. […] For each occasion a specific motif is drawn on the floor or on the wall. For instance, in Lakshmipuja a stack of paddy or rice sheaves is drawn on the walls structured like a pyramid. […]
Mandritra io fotoam-pifaliana io, voaravaka sary amin'ny kobam-bary fotsy na pithau ny rindrina fotaka sy ny gorodona. Antsoina hoe jhoti na chita izy ireo ary tsy natao sary fotsiny mba handravahana ny trano fa mba hametrahana fifandraisana eo amin'ny zava-miafina sy ny hita maso ihany koa, noho izany dia tena tandindona sady misy dikany izy io. […] Asiana sary manokana eny amin'ny gorodona na eny amin'ny rindrina isaky ny fotoana miavaka iray. Ohatra, ao Lakshmipuja, atao sary toy ny pyramida eny amin'ny rindrina ny fehezam-bary na ny salohim-bary . […]
Raha atao sary amin'ny rindrina ny jhoti any India, ny jhutti kosa dia vita amin'ny salohim-bary avy any amin'ny lemaka atsimon'i Nepal tahaka ny kathirkula any Kerala, saingy noforonina amin'ny endriny be pitsiny kokoa. Aorian'ny fijinjana vary, randranina ho jhuttis ireo salohim-bary efa voasafidy ary ahantona ambony eo amin'ny meh ( tsato-kazo volotsangana izay hamatorana ny omby rehefa manosihosy vary). Fantatra manokana amin'ny fanomanana jhuttis isaky ny karazam-bary jinjain'izy ireo ny mponina Tharu.
Avy eo ankavia miankavanana: kakahi – ny fihogo, maur – ny haingom-bolon'ny mpanambady, kauwa tholi – ny vavan'ny goaika ary ny Patiya – ny tsihy. Saripikan'i CK Kalyan Tharu. Nahazoana alàlana.
Samihafa ny endrika sy ny haben'ny Jhuttis. Avy amin'ny aingam-panahin'ny natiora sy ny zavatra manodidina toy ny kauwa tholi na ny vavan'ny goaika , ny patiya na ny tsihy, ny kakahi na ny fihogo, ny jhunjhuna na ny kilalaon-jazakely, ny bena na ny fikopakopahana, ny bakhari na ny sompitra, ny maur na ny haingom-bolon'ny mpanambady, ankoatra ny maro hafa.
Raha araka ny finoan'izy ireo, rehefa tsy misy na inona na inona intsony ho tsindrohan'ny vorona dia ny Jhutti no lasa mariky ny fitiavana ny natiora ao amin'ny Tharus satria nahantona izy ireo hanomezana sakafo ho an'ny vorona tany am-boalohany ary natao isaky ny karazam-bary nojinjaina ny Jhuttis.
Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny Global Voices, nampatsiahy ny maha-zava-dehibe ny natiora ao amin'ny fomban-drazana fanaovana ny Jhutti ny Filohan'ny Toko Siraha Tharu Kalyankarini Sabha (fikambanana mpiahy ny Tharu) Chandra Kishore Kalyan Tharu:
Tia sy nanompo ny natiora ny razambenay. Nandrandrana ny Jhuttis izy ireo mba tsy ho fatin'ny hanoanana ireo vorona aorian'ny fijinjana.
Sombim-baovao natao scan momba ny Fifaninanana Jhutti nokarakarain'ny Zaikaben'ny Fampandrosoana ny Vondrom-piarahamonina Barchhawar mba hamelomana indray ny fomban-drazana amin'ny fanaovana ny Jhutti, notaterin'ny gazety mpivoaka isan'andro Kantipur ao Nepal. Saripikan'i CK Kalyan Tharu. Nahazoana alàlana.
Na izany aza, adino any Nepal ity zavakanto tsara tarehy ity ary saika nanadino izany zavakanto amin'ny fanaovana jhuttis izany ny taranaka tanora. Ilaina amin'izao fotoana izao ny mitahiry ity fomban-drazana fahiny ity amin'ny fanenomana ny salohim-bary ho endrika asakanto tsara tarehy .